Fitaovana manara-penitra avo lenta fanerena fanamafisam-peo IV orinasa mpamokatra kateter sy mpanamboatra | Sanxin
Catheter tsindry tsara an'ny karazana fiarovana IV
Ny mpampitohy tsindry tsy misy ilana azy dia manana fiasa mandroso fa tsy fantsona fanamafisam-peo miiba amin'ny tanana, manakana amin'ny fomba mahomby ny fiverenan'ny rà, mampihena ny sakan'ny kateter ary manakana ny fahasarotana fampidirana toy ny phlebitis.
Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd dia orinasa teknolojia avo lenta manokana miompana amin'ny fitaovana R&D, famokarana, varotra ary serivisy. Taorian'ny 20 taona mahery nangonina, ny orinasa dia manana fomba fijery manerantany, manaraka akaiky ny paikadim-pampandrosoana nasionaly, manaraka akaiky ny filan'ny klinika, miantehitra amin'ny rafitra fitantanana kalitao tsara sy ny R&D matotra ary ny tombony amin'ny famokarana, i Sanxin no nitarika ny indostria handalo ny rafitra fitantanana kalitao CE sy CMD.
◆ Ny mpampitohy tsindry tsy misy ilana azy dia manana fiasa mandroso fa tsy fantsona fanamafisam-peo miiba tsara, manakana amin'ny fomba mahomby ny fiverenan'ny rà, mampihena ny fikatonan'ny kateter ary misoroka ny fahasarotana fampidirana toy ny phlebitis.
◆ Fitaovana miaro tendrony fanjaitra tsy manam-paharoa dia miantoka fa ny fanjaitra fanjaitra dia alaina ao anaty fehikibo fiarovana aorian'ny fahombiazan'ny puncture, manakana amin'ny fomba mahomby ireo mpiasa ara-pitsaboana tsy ho tototry ny fanjaitra ary hisorohana ny fifindran'ny aretina.
Modely sy tsipiriany:
Famaritana: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G ary 26G
Teo aloha: Fitaovana fanosotra vahaolana mangatsiaka ho an'ny krioterôgrafika ho an'ny fampiasana tokana
Manaraka: Syringe sterile ho an'ny fampiasana tokana
Iv Catheter Brands
Fanjaitra Catheter Iv
Iv karazana kateter
Iv catheters amidy
Kitapo catheter amin'ny vina afovoany
Catheter tsindry tsara IV
Fonosana katesera afovoan-tany (ho an'ny dialyse)
Catheter mihidy IV
Catheter mahitsy IV